Myanmar Chit Thu Wai Perform for Lazy Club Live in Korea Concert 2010 | Myanmar Singer and Vocalist Photos
Myanmar Chit Thu Wai Perform for Lazy Club Live in Korea Concert 2010
Myanmar Singer, Chit Thu Wai @ Lazy Club Live in Korea Concert
Here are some photos of Chit Thu Wai while she was performing for Lazy Club Live in Korea Concert which was held on 21 September 2010 in Korea. Myanmar Singers; Thazin, Jenny, Chit Thu Wai, L Lone War, He' Lay and Khin Maung Toe performed for this concert together with Lazy Club Band. Myanmar Singer : Chit Thu Wai
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ စက်တင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ Lazy Club Live in Korea Concert ပွဲမှာ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ချစ်သူ့ဝေရဲ့ Photos တစ်ချို့ပါ။ ဒီပွဲမှာ Lazy Club နဲ့အတူ သဇင်၊ ဂျင်းနီ၊ ချစ်သုဝေ၊ Lလွန်းဝါ၊ ဟဲလေး နှင့် ခင်မောင်တိုး တို့ ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ADVERTISEMENT
AngelSeptember 22, 2010 at 11:14 PMUr not look likeagirl ..why ru wearing this dressReplyDeleteblessSeptember 23, 2010 at 1:11 PMshe is so cuteher dress is very niceReplyDeletephone myatSeptember 23, 2010 at 4:19 PMသူဝတ်ထားတာမြန်မာမိန်းကလေးတွေအတွက်သိက်ခါရှိပါတယ်တကယ်ဆိုတတ်ရင် sex...ဖြစ်ဘို့မလိုပါဘူးsex... ကိုဦးစားပေးရင် တာရှည်မတည်မြဲပါဘူးReplyDeletebawaSeptember 24, 2010 at 8:31 AMsout yuu ...ReplyDeleteIncognitusSeptember 25, 2010 at 12:22 AMကျက်သရေရှိတဲ့ချစ်သူဝေကို ချီးကြူးတယ်။ ခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ထင်တာဘဲ။ ဖါမအများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတွေ။ReplyDeleteဘလော့ဂါ ဇော်ဇော်September 25, 2010 at 3:30 AMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteဘလော့ဂါSeptember 25, 2010 at 3:55 AMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteMr.alterSeptember 25, 2010 at 5:30 AMဘာသာရေးမပြောပါနဲ့။ဒိကောင်မတွေကို ကြိုက်သလို ဝေဖန်လို့ရတယ်။ ဘာသာရေးတော့မပြောနဲ့။တော်ကြာ ဒီလို ဆိုဒ်ကောင်းတွေပြောကုန်အုံးမယ်။ReplyDeletethi riSeptember 26, 2010 at 7:44 AMခရစ်ယာန်ဖါမ tawe lalamyar gyi par... Koe kwal tar nae ma sine par bu...ReplyDeleteko koSeptember 26, 2010 at 8:28 AMhey,,Blogger and Thriri..Fuck your mother and your sister ,,Dont,distube christionReplyDeletemhonSeptember 26, 2010 at 4:54 PMမင်းသမီးတွေ အဆိုတော်တွေကို ဝေဖန်ရင်းကနေ ဘာသာရေးတွေပါ ပါလာတာမကောင်းဘူး..။ ဘာသာရေးနဲ့ မဆိုင်ဘူး..။ လူနဲ့ ပဲဆိုင်တယ်။ ရွတဲ့ မိန်းမကတော့ဘယ်ဘာသာ ကိုးကွယ်ကွယ် ရွမှာပဲ.. ဘာသာရေးက လူတွေယုံကြည်ရာ ကိုးကွယ်တာ ..။ မိန်းမတွေက ရွတာ.. လူကိုပဲတိုက်ရိုက် ဝေဖန်ပါ..။ ဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ် သူ့ ဟာနဲ့ သူတော့ လေးစားစရာပဲ။ReplyDeletephone myatSeptember 26, 2010 at 7:57 PMဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်ညိူလေးစားစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာသာတခုကိုအတွင်းကျကျမလေ့လာပဲနဲ့ဘာသာေ၇းကိုထိခိုက်ဝေဖန်တာတော့မကောင်းပါဘူး. လူမကြိုက်၇င်လူပဲဝေဖန်တာကောင်းတယ်ဗုဒွဘာသာ. ခရစ်ယာန်ဘာသာ. အစ်စလာန်ဘာသာတွေမှာကောင်းတာတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်. လူတွေကိုဒုက်ခေ၇ာက်စေတဲ့လမ်းစဉ်တွေမညွှန်ပြထားကြပါဘူး ဗုဒွဘာသာဆိုတာကံကိုယုံကြည်တယ်[ကံဆိုတာအလုပ်ပဲ]ကံဆိုတာဘုရားကဖန်ဆင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရမယ်အဲတာတွေကိုကံလို့ခေါ်တယ်ချောက်ထဲကိုကိုယ်ခုန်ချရင်ကိုယ်ပဲသေမှာပါဘယ်သူမှလိုက်သေပေးလို့မရပါဘူးဘယ်ဘုရားမှလည်းကယ်လို့မရပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ညဏ် ကံ[အလုပ်]နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆင်းရဲခြင်း-ချမ်းသာခြင်း ဘယ်ဘုရားမှဖန်တီးပေးလို့မရပါဘူးဘုရားဆိုတာမေတတာရှင် ဂရုဏာရှင်ပဲလူတွေအားလုံးကိုတန်းတူဖန်တီးပေးမှာပေါ့ရုပ်လှတဲ့လူ.ရုပ်ဆိုးတဲ့လူ၊ မျက်လုံးကောင်း.မျက်လုံးကန်း၊အင်ဂါစုံ.အင်ဂါမစုံနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံရတာတွေ၊သဘာဝဘေးကပ်ဆိုက်နေတာတွေကိုဘုရားကခွဲခြားပြီးဖန်တီးမပေးဘူးဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်.ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်သူ့ကံနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သဘာဝကလည်းသဘာဝအတိုင်းပဲလူဆိုတာအဖိုနဲ့အမပေါင်းစပ်မှလူဖြစ်တာလူသတတ၀ါအားလုံးသံသရာကြီးမှာလည်နေကြတာပဲလက်ရှိအချိန်မှာကောင်းအောင်နေရင် နောင်လည်းကောင်းမှာပဲလူဘယ်ကစတယ်ဆိုတာထက်-မြှားဆိပ်သင့်ခံနေရတဲ့လူကိုအရင်ကုမှာလားမြှားပစ်သွားတဲ့လူနောက်ကိုလိုက်မှာလားအဓိကနဲ့သာမညကိုခွဲခြားသိဘို့လိုပါတယ်ဘာသာရေးကိုပုတ်ခတ်နေမဲ့အစားကိုယ်ဘာတွေကောင်းတာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာတွေကိုပဲပြန်စဉ်းစားပြီးကောင်းတာတွေကိုပဲဆက်လုပ်ပါReplyDeleteSa NaySeptember 26, 2010 at 11:08 PMခရစ်ယာန် ငပိတွေကဘာသာရေးဗဟုသုတမရှိတော့သူများဘာသာကိုစော်ကားဘို့ဝန်မလေးဘူးနော်ReplyDeleteဘလော့ဂါSeptember 27, 2010 at 4:05 AMဆောက်ကန်းkoko မင်းတို့ဂိုင်းချုပ်ကြီး ကမ္ဘာပတ်ပီး ကမ္ဘာသိ တောင်းပန်နေရတာ၊အိုကြီးအိုမနဲ့ အေးဆေးအပူစော်ခံနေရမဲ့ အချိန်မှာ၊ဆန္ဒပြခံနေရ၊ ပြသနာ ရှင်းနေရတာတွေကမင်းတို့ လိုကောင်တွေ ကြောင့်ပဲ။ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတိုင်းမှာ ကောင်းတဲ့အကျင့် ၊ကောင်းတဲ့တရားတွေ အများကြီးရှိတာပဲ။ငါနဲ့ နေ့ တိုင်းထမင်း အတူတူစားနေတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေမှာ ခရစ်ယာန်၊မွတ်စလင်၊အိန္ဒိယ၊ဗုဒ္ဓဘာသာ အစုံပဲ။နိုင်ငံလဲ အစုံပဲ ။မိသားစုအကြောင်း၊ဘာသာရေးအကြောင်း ပြောနေကျတာလဲအစုံပဲ။ငါ စင်္ကာပူမှာ လုပ်နေတာ ၁၀ နှစ်ကျော်ပီး ဘယ်သူမှ စကားများတာလဲ မရှိဘူး။မင်းလို ရိုင်းတဲ့စကားပြောတာလဲ မတွေ့ ဖူးဘူး။ဒီမှာ လာပီး ရေးချင်သလို ရေးတာဆိုယင်တော့ မင်းတို့ တန်းခိုးရှင်တော့ သိလိမ့် မယ် ထင်ပါတယ်။ဒီထက်ပိုပီး ဆိုယင်တော့မင်းတို့ ဂိုင်းချုပ်ကြီးသိယင်ပိုပီး အလုပ်ရှုပ်နေမယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပီး သန်းရွှေ လိုကောင်တွေရှိနေလို့ ပြည်ပက ငါတို့ တွေလဲ အရှက်တွေ ကွဲနေတာ။..ကိုယ်ဘာသာကို တကယ်ချစ်ယင် ဘာသာရေးထဲက ကောင်းမွန်တဲ့ အကျင့်အကြံ ၊ တရားတွေ လိုက်နာကျင်သုံးနိုင်ပါစေ။..မဆဲပါနဲ့ကွာ ၊ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆွေးနွေးတာပေါ့ ။ဒီလို နေရာမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောနိုင်တာပဲ။အေးအေးဆေးဆေးပေါ့ ။ReplyDeletekyawSeptember 27, 2010 at 7:02 AMဘာသာရေးမပါတာကောင်းပါတယ်ဗျာ.....သူလေးကတော့ ပိပိရိရိပါပဲ..ဘယ်လိုလဲတော့မသိReplyDeleteNhinnSeptember 27, 2010 at 9:47 PMဟ၊ဘာဖြစ်ကြတာလဲ၊ReplyDeleteNhinnSeptember 27, 2010 at 9:49 PMဒီမှာတော့ချစ်သုကလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်၊ReplyDeleteNhinnSeptember 27, 2010 at 9:50 PMထင်ပေါ်မှုမှာဖင်ပေါ်ဖို့မလိုပါဘူးReplyDeleteko koSeptember 28, 2010 at 2:10 PMhello,, Blogger..I read your comment. you living in Singapore..I living in Norway.I am burmese but Living in Norway over 15 years I am norwegian citizenship.I am christion baptish .I am not Romancatholic .your can write Romancatholic..but don,t write all christionReplyDeleteဘလော့ဂါSeptember 29, 2010 at 7:12 AMhi ko ko, ဒီလိုပါပဲ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလဲ စာရွက်တွေ မီးရှို့ ပေးတာ ဟိုဘက်က(သေသွားတဲ့ လူတွေ)ရတယ်တဲ့ ၊ ငါလဲ နားမလည်ပါဘူး ၊ ထေရ၀ါဒ၊ မဟာရဏ မတူတာပေါ့ ။ ဘာသာမတူတဲ့ လူတွေကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ကြောင်တောင်တောင် လုပ်တယ်ထင်ကြမယ် ။ဘယ်ဘာသာထဲမှာမဆို မကောင်းတဲ့ လူတွေ ရှိတာပါပဲ။ကိုယ်ကြောင့် သူများဒုက္ခမရောက်တာ ၊ အနှောက်အယှက်မဖြစ်တာ ကောင်းတာပေါ့ ။ReplyDeleteဘလော့ဂါSeptember 29, 2010 at 8:50 AMhi ko ko, ပထမဆုံး ဘာသာရေးအကြောင်း ထည့်ရေးထားတာ မင်းလည်းတွေ့ မှာပါ ။ ခရစ်ယာန် နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လှဲ့ ပီး ဖတ်ကြည့်လေ၊မင်းရင်ထဲ ဘယ်လိုဖြစ်သွား မလဲ။နိုင်ငံခြားမှာ ၁၅ နှစ်ကျော် နေနေတာပဲ၊ အတွေးအခေါ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ReplyDeleteLazy BoyOctober 2, 2010 at 10:09 PMKO KO,KO KO,I don't want to talk anymore, but u should think deeply.ReplyDeleteko koOctober 7, 2010 at 5:41 AMi don;t understand that this girl become singer, how can? can u listen properly ? her voice...,really, i can not stand it...tooo bad man, like shouting crow. ya really....no way to be have it... how can?ReplyDeleteTawOctober 10, 2010 at 10:13 PMAyam chat sayar kaw d.Bar lope lope chat tel.amary aa pay nay mel.ReplyDeleteSoeOctober 11, 2010 at 2:49 AMIncognitus said... ကျက်သရေရှိတဲ့ချစ်သူဝေကို ချီးကြူးတယ်။ ခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ထင်တာဘဲ။ ဖါမအများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတွေ။ya u know what work u are doing.ကမ္ဘာနဲ့ချီကြည့်ရင် မင်းတို့အမျိုးတွေကဖာမ ပိုများတယ်.ReplyDeleteSa NayOctober 11, 2010 at 5:28 PMခရစ်ယန်ဖာငပိ Incognitusတောင်မဟုတ် မြောက်မဟုတ်ဘာကိုးကွယ်လို့ကွယ်လို့ကွယ်ရကောင်းမှန်းမသိလို့သူများနောက်လိုက်ငပိစားခရစ်ယာန်ဖာမရေနင့်ကိုဗုဒွဘာသာဝင်တွေကစောင့်ဖက်မလုပ်လို့ပေါက်ကွဲနေတာလား?တန်ဘိုးရှိတဲ့အရာကလွယ်လွယ်နဲ့မရဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါတန်ဘိုးရှိတဲ့ဘာသာကိုလည်းဒီလိုပဲနင်တို့လိုအမြီးမြှောက်လိုက်၊အီးပေါက်လိုက်ကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးကွနင်တို့လိုနောက်လိုက်မှီကပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနလဘိန်တုံးခရစ်ယန်ငပိတွေ ဗုဒွဘာသာဆိုတာဘာလဲသိချင်ရင်အပေါ်မှာဘုန်းမြတ်ရေးထားတာကိုဖတ်ကြည့်ဘာသာေ၇းကိုအသလွတ်စတင်တိုက်ခိုက်တာနင်ပဲဖာငပိခရစ်ယန်များအသင်းဝင်ဖာသည်ရေReplyDeletekhinsandarOctober 14, 2010 at 3:27 PMIncognitus ကသူဝါသနာပါတဲ့(phar) စာရင်းပြုစုရေးမှာလုပ်နေတယ်ထင်တယ်ဝါသနာပါရင်ဆက်လုပ်ပါ၊သူများဘာသာကိုတိုက်ခိုက်နေတာတော့စိတ်ဓါတ်အောက်တန်းကျလွန်းတယ်ReplyDeleteamoneluthaOctober 16, 2010 at 11:20 AMwow...Chit Tu Waiyou look very good..she has notastrong voice..but we like you ..ReplyDeleteko koOctober 17, 2010 at 4:49 AMr u all r blind? what the things have beauty or voice in this girl, voice like crow , face like nothing.. what u all like for this girl? u all r so stupid ...yaReplyDeleteko koOctober 17, 2010 at 4:55 AMhay Incognitus, r u phar?christion baptish phar? ohh i see... u all r in every sunday go to charg.. fo business.. is it? ya .. here the same, every sunday ... go charg, for do fucking business that uall.. i know now... goodReplyDeletehtetOctober 23, 2010 at 6:36 AMchit chu wai is such an idiot her sound is so weird.she should sing only at the funeralReplyDeleteko koOctober 24, 2010 at 12:14 AMu r right man, i agree with u htet, u r the one i saw, in this chat, who got brain.ReplyDeletejueOctober 27, 2010 at 9:29 PMKo Ko and Incognitus you are all fucking douchbags.first of all, ko ko sout paw if u want to comment in english learn to write english properly maybe u can get one of those pity lesson from ur church and church is spelled c-h-u-r-c-h not some fucking charg. suchadumbass.Incognitus,ur another dumbass,why do u assume that prostitues are mostly buddhist? do not assumeaperson's personality, or appearence by their look. well i don't want to say much to someone who isn't as educated as u should've been. u probably wouldn't even understand half of what i'm saying.well people who comment craps about other people's religions are people who are just like u, who belongs nowhere. next time think twice before u comment or ur just makingafool of urself.TruthfullyMa Ma, B.C, CanadaReplyDeleteHotNovember 19, 2010 at 8:17 PMhey all of u i am christian too okay if u r christian don't say to other popel blieve in like that okay? Bible tell us jsut sayabout love don't sayabout hate okay please and thanksany way i love chit thu waiReplyDeleteA380December 13, 2010 at 8:00 AMwhat's up !!! don't fight any kinds of religion plz! everyone can comment on the online very freely without charges right? soba man !ReplyDeleteA380December 13, 2010 at 8:07 AMjue! u say the truth , they r useless devil sons!ReplyDeleteA380December 13, 2010 at 8:11 AMjue! surely they use the words by what their religious teachReplyDeleteA380December 13, 2010 at 8:18 AMko ko & htet ! may i knowalitle bit about u r parents characteristics!is that right? ( childrens like parents )ReplyDeleteA380December 13, 2010 at 8:33 AMblogger & thi ri! how u r parents growth ?ReplyDeleteA380December 13, 2010 at 8:46 AMincognitus! how about u r parents too?what is u r christian concepts? i m also christian but never fight any religion! u r life also growth from very low environment ! don't proud ur self coz it will kill ur spirit soon!b aware that seriously !ReplyDeleteကိုကိုApril 16, 2011 at 7:20 AMခရစ်ယာန်ဆိုတာ ဖာသယ်မတွေကိုးကွယ်တာလေ လူတာနဲ့ပေါင်ခွအိပ်ပြီးရင် မွေးလာတဲ့ကလေး ဘုရားပေးတာပဲ အဲလိုအတန်းအစား ခရစ်ယာန်ပါReplyDeleteRepliesko koFebruary 5, 2012 at 2:36 AMyour mind is LOW standard ? LOOK LIKE ANIMAL MINDhow many percent living in myanmar?how many percent believe buddish?80% pha......?how many percent believe christion 10% ,,pha...?DeleteReplyAdd commentLoad more...